Shaqaale ka tirsanaa Xaafiiska RW Soomaaliya oo ka mid noqday dadka ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Itoobiya | Hadalsame Media
Home Wararka Shaqaale ka tirsanaa Xaafiiska RW Soomaaliya oo ka mid noqday dadka ku...
Shaqaale ka tirsanaa Xaafiiska RW Soomaaliya oo ka mid noqday dadka ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Itoobiya
(Addis Ababa) 10 Maarso 2019 – Allaha kuu Naxariistee Shahaad Cabdishakuur oo ka tirsanaa shaqaalaha fir-fircoon ee xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka mid noqday dadka la xaqiijiyay inay ku dhinteen shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay dalka Itoobiya.
Waxaa jira cabsi kale oo ku saabsan haddii dad kale oo Soomaaliyeed ka mid yihiin rakaabkii saarnaa diyaaradaasi oo la sheegayo in dhamaantood aysan cidna ka badbaadin.
“Ma jirto cid ka badbaadey duullimaadkaasi, kaasoo sidey rakaab ka kala socdey 33 dal,” ayuu yiri nin u hadlay hay’adda warbaahinta qaranka ee Ethiopian Broadcasting Corporation, oo soo xiganayey saraakiil ka tirsan shirkadda EI.
Lama sheegin ilaa iminka tafaasiil ku aaddan waxa ridey dayuuraddan oo ahayd moodalka Boeing 737-8 MAX, taasoo cusbayd oo ay Itoobiya soo gadatay bishii Nofeembar.
“Waxaa la xaqiijiyey inuu shilku dhacay 8:44 (am),” ayuu yiri afhayeenka oo aan magaciisa sheegin.
Dayuuraddan oo ay gebi ahaanba wada leedahay dowladda Itoobiya ayaa siddey 149 rakaab ah iyo 8 shaqaale ah, markii ay dhacaysey.
Dayuuradda ayaa gegada Bole International Airport ka duushay saacadda maxalliga ah 8:38am (06:38 GMT) waxaana “markiiba lumay xiriirkeedii” 6 daqiiqo uun kaddib meel u dhow Bishoftu (Debre Zeit), oo ah magaalo 60km koonfur bari kaga toosan Addis Ababa dhanka jidka.
Dayuuraddan oo ah nooca Boeing 737-800MAX waxay la mid tahay dayuuraddii Indonesian Lion Air ee dhacday bishii Oktoobar, 13 daqiiqo uun kaddib markii ay ka duushay Jakarta, taasoo ay ku dhinteen 189 qof oo saarnaa.
Yeelkeede, shilkii ugu dambeeyay ee ay soo mara Ethiopian Airlines wuxuu ahaa mid qabsaday Boeing 737-800 taasoo qaraxdey markii ay ka duushay Libnaan sanaddii 2010, taasoo ay ku dhinteen dhamaan 83 rakaab ahaa iyo 7 shaqaale ahaa.
Previous articleARSENAL VS MAN UNITED: Shaxda & safafka ay galabta kusoo geli karaan!
Next articleRW Soomaaliya oo ka qaybgalay Aas-Qaran oo la sameeyay Wasiirkii Dastuurka Soomaaliya + Sawirro